Mazino Anonyadzisa | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Mazino Anonyadzisa Kuwana Zvakanakisisa Iwe?
Uri Kupotsa, Chakatsemurwa Kana Kungori Plain Zvinonyadzisa Chero Mazino? Uri Kufarira Kutsiva Mazino Ako Asipo Nhasi?
Mimwe yemaitiro akajairika anoitwa paOptismile anosanganisira:
KuOptismile, tinobatsira varwere vane mazino akakuvara mazuva ese. Mazino akasarudzika, akachekwa, akatsemuka, akaora uye akasviba mavara anogona kunyadzisa, uye vanhu vazhinji vane matambudziko akakomba nemeno avo vanononoka kuona chiremba wemazino nekuti vanonzwa kunyara nenhanho yekukuvara kana kuora kana kunetseka nezvekugamuchira hurukuro kubva ku chiremba wemazino.
KuOptismile, tinopa varwere vedu nharaunda yakachengeteka - isina kutonga - kwaunowana kurapwa kwaunoda kuti udzore kunyemwerera kwako. Isu tinonzwisisa kuti hazvisi nyore nguva dzose kutsvaga rubatsiro, asi tinoziva zvakare nyaya dzakakomba dzinogona kumuka kana matambudziko emazino akasiiwa asina kurapwa - uye nzira dzekurapa mazino ako akakuvara dzinogona kunge dzakanyanya kukuvadza kupfuura iwe zvaunofunga!
Kana mazino akakuvara zvakanyanya kana kuora, tinogona kuadzoreredza neakanaka porcelain veneers ayo anochengetedza mazino ako echisikigo munzvimbo kuti urege kuarasa. Pasina kukuvara kwakanyanya, kusunga mazino inzira isingadhuri iyo inogona kuitwa mukushanya kumwe chete.
Kana iwe ukanyadziswa nemeno ako kana kunyemwerera, uye pfungwa yekuona chiremba wemazino inoita kuti unzwe kunyara kana kunetseka, zviitire iwe nyasha uye fonera Optismile. Vanachiremba vedu vane ruzivo vanokutungamira nenzira yekudzoreredza uye vagadzire chirongwa chekurapa chakakodzerana nezvaunoda chaizvo. Pakupera kwezuva, iwe unofara iwe wafona.
Dr Clifford Yudelman uye Chikwata
Nekanyorovera uye Kunobata Kubata.
At OptiSmile high tech, cosmetic dentists in Cape Town, tinotenda mukuchengetedza mazino ako uye nekuasimbisa kuti aburitse kunyemwerera kwakasimba, kwakatwasuka, kuchena, uye kuvimba. Tine chivimbo chedu pabasa redu zvekuti tinopa 5-gore sevhisi yebasa pane zvekuzadza uye zvedongo kudzoreredzwa Izvo zvese zvaunoda kuti uite kutevedzera zvirevo zvekuchengetwa uye kuenda kune ako akarongwa, bi-pagore kuongororwa uye kuchenesa kuOptiSmile.
Taura nesu Nhasi Nechisarudzo?